kokanhla's Page - Myanmar Network
ကဗျာ '' အညာ '' ကဗျာ
Started this discussion. Last reply by lethiri shwe Jul 1, 2012. 1 Reply 1 Like
'' လွမ်းဖွယ့် အညာ --- သို့''ညီငယ်ချင်းတွင်း ဆုံကာဆင်းသည့်နောင်ကြီးဧရာ အောက်နားဆီကအနောက်ဖက်ခြမ်း တစ်ဖက်ကမ်းမှာကျေးလက်ဘာဝ အေးချမ်းလှသည့်နေ့ချင့်စရာ အမေ့ရွာ၌ချစ်သောသူတို့ နေထိုင်တယ်။ရွာဦးတစ်ခွင် ခြောက်မိုင်လွန်သော်စေတီရုပ်ပွား …Continue
ကဗျာ '' ချစ်သူတိုင်းအတွက် '' ကဗျာ 6
Started Jun 25, 20120Replies3Likes
'' အလွမ်းနေ့ ''ပြီးခဲ့လေပြီသို့ပေမည့်လည်း - - - - -မိုးတွေညို့တိုင်းရင်မှာတမ်းတလွမ်းမိရသည်ထီးလေးတစ်ချောင်းတူတူဆောင်းပြီးအဖြေတောင်းသည့်မိုး တစ်နေ့ ။ ။ မောင်ကံလှ ( ပခုက္ကူ ) 16 -2- 00 ,…Continue
ကဗျာ '' ချစ်သူတိုင်းအတွက် '' ကဗျာ
Started Jun 23, 20120Replies 1 Like
'' မောင့်လက်ဆောင် ''နှစ်ကိုယ်တွေ့လျှင်ချစ်ခြင်းရည်တူသူကြည်ဖြူက ---ချစ်သူဓလေ့သူပျော်မွေ့အောင်အကြိုက်ဆောင်ရ်ျကေသာလွလွနဖူးစနဲ့ပန်းနုပါးပြင်နှင်းဆီနှုတ်ခမ်းပျားရည်ဆမ်းသည့်အနမ်းပန်းတွေပန်ရလေအောင်စောင့်ကြိုနေတော့ မောင့်ချစ်သူ ။ …Continue
Started this discussion. Last reply by Nant Thin Thin Hmwe Jun 21, 2012. 1 Reply0Likes
'' ချစ်သူသိစေ ''သူ့ကိုချစ်တာ ဤကမ္ဘာ၌တူတာမရှိ ငါအသိဆုံးသူလည်းသိစေချင်ပါသည်။ငါဧ။်မေတ္တာ ဤကမ္ဘာဝယ်ရေနှယ်အေးမြ သူ့ဘ၀တွက်ချမ်းမြေ့ရိပ်မြုံ ပြီးပြည့်စုံ၍လုံခြုံစိတ်ချ နေပျော်ရအောင်ငါလျှင်လိုက်လျှော ချစ်တင်းနှောမည်နှစ်ပေါင်းရာချီ တိုင်သည်ထိ ။ငါဧ။်မေတ္တာ…Continue
"ကဗျာ လက်ဆောင် ဖတ်ရအောင်ပေါ့"
Started this discussion. Last reply by Nant Thin Thin Hmwe Jun 18, 2012. 1 Reply0Likes
" သစ္စာအနမ်း မေတ္တာလမ်းက နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ "ချစ်သူ - - - - -ချိုသောအနမ်းနှုတ်ခမ်းတစ်စုံရင်ခုန်အိပ်မက်လွမ်းရလျှက်ပါအိပ်ပျက်တာလည်း များခဲ့ပြီ ။တစ်ရက် နှစ်ရက်ရက်မှလပြောင်းနှစ်တွေငြောင်းလည်းပြန်ပြောင်းတသမေ့ မရပါမင်းနဲ့ငါရဲ့နှစ်ယောက်တစ်ကမ္ဘာ နေ့ရက်များ…Continue
သင်္ကြာန် လက်ဆောင် ပါးရအောင် (၂ )
Started this discussion. Last reply by Myo Myint Kyaw Mar 31, 2012. 1 Reply0Likes
လွမ်းသူ့ သင်္ကြာန် (၂ )နှစ်ဦးချိန်ခါ သည်အတာ၌ရွှေရည်ပက်ဖြန်း ပိတောက်ပန်းနှင့်မြတ်နိုးတွယ်တာ ခင်ရပါသောလှပကျော့ရှင်း သူငယ်ချင်းကိုရင်မှ မေတ္တာ ဖြူစင်စွာဖြင့်တစ်ဦးတည်းကိုယ် ပန်ပေးလိုလည်းတစ်မြို့တစ်ရွာ ဝေးနေပါ၍မရွှင်နွမ်းလျှ ကိုယ့်ဘ၀ကိုသူမ-…Continue
သင်္ကြာန် လက်ဆောင် ပါးရအောင်
လွမ်းသူ့သင်္ကြာန်နှစ်ဦးချိန်ခါ သည်အတာ၌ငွေဖလားခွက် နံ့သာစက်နှင့်မြတ်နိုးတွယ်တာ ခင်ရပါသောငယ်သူငယ်ချင်း လှယမင်းကိုအေးစေမြစေ မေတ္တာဝေပြီးဦးစွာပထမ လောင်းလိုလှလည်းတစ်မြို့တစ်ရွာ ဝေးနေပါ၍ရင်ဝယ်လွမ်းဆွတ် ကိုယ့်အဖြစ်ကိုငယ်ချစ်-သိစေချင်ပါသည် ။ …Continue
At 18:22 on July 7, 2012, lethiri shwe said…
pleased to make friends with you, ko kan hla. wish your life is beautiful as per your name.
At 16:02 on March 24, 2012, nanyiyimon said…
thanks bro for ur takecare
At 16:02 on March 1, 2012, Moe Thar said…
တွေ့ရ ခင်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်နော်